विदेशमा बसेर एमसीसी ठिक छ भन्नेहरुलाई डा. युवराज संग्रौलाले दिए कडा जवाफ - Himali Patrika
विदेशमा बसेर एमसीसी ठिक छ भन्नेहरुलाई डा. युवराज संग्रौलाले दिए कडा जवाफ
हिमाली पत्रिका १७ असार २०७७, 7:56 am
विदेशमा बसेर अमेरिकी सहयोग एमसीसी बारे अनेक टिप्पणी गर्नेहरुलाई डा. युवराज संग्रौलाले कडा जवाफ दिनुभएको छ। विदेशमा बस्ने केही केही नेपाली भन्ने शब्द जोडिएका विद्वानहरु जो दुनियाँ आफुले मात्र जानेको छ, दुनियाँ अरुले बुझ्न सक्तैनन, तेस्मा पनि नेपालमा बस्नेले त घाँस खान्छ्न भन्ने ठान्छन। डा. संग्रौला लेख्नुहुन्छ, तेस्तो होइन। यहाँ नेपालमा बस्ने पनि अंग्रेजी बुझ्न सक्तछ्न। एमसिसिका बारेमा नेपालमा बस्नेलाई गाली गर्छन।इमेल र सामाजिक सन्जाल बाट उग्र रास्ट्रबादको भुंङ्ग्रोमा एमसिसि पर्यो भन्छ्न।
यस्तो छ उहाँले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभएको सुझाव बुँधागत रुपमा..
१. यो नंहुदा नेपाल बिकास भएन अरे। के भो त, तपाईं यहाँ बस्नु हुन्न। यहाँका मानिस घाँस खाएरै बस्लान। तपाइलाइ के नोक्सानी हुन्छ र? नेपालको राजनीतिमा हाबी हुनु तपाइँलाई किन अवास्यक छ। यहाँ घाँस खानेले गल्ती नै गरेछ्न अरे, तेस्ले तपाईको जागिर र अमेरिका असर गर्दैन। किन तपाईंलाई यति धेरै चिन्ता? नेपालीको मायाले वा नेपाल पश्चिमी अधिनमा रहनु पर्छ भन्ने चाहाना? चाइनिज आएछ्न अरे लौ, शोशण त हामी घाँस खाने कै गर्लान। तपाइको केही नोक्सानी हुने वाला छैन। तेसो भए किन चिन्ता?
२. सन् २०१७ र २०१९मा भएका दुबै संझौता पढ्नु भएको छ? पढेको भए, यात तपाईलाई नेपालको पनि रास्ट्रीय स्वार्थ छ भनेर तपाईं मान्नु हुन्न यात त तपाइँलाई नेपालको होइन अरु कसैको स्वार्थको मतबल छ। यदि संझौता पढ्नु भएको छ भने, उतर दिनुहोस्।
क. यो परियोजना लागू भएन अरे, तपाइँहरुले भने जस्तै नोक्सानी नेपाललाई हुने हो। परियोजनामा पैसा दिनेलाई पैसा दिन किन यत्रो चासो? मलाइ मोहि चांहीदैन म भनिरहेको छु, साहु मोहि लैजा भनेर फकाउने, गाली गर्ने, घुर्की लगाउने, हप्काउने गर्छ्न। के तेसो गर्दा मलाई साहुको केही स्वार्थ छ भन्न पाउने स्वतन्त्रता छैन? किन यो परियोजना चल्नै पर्ने चाहान पैसा दिनेको बढि, लिने भन्दा?
ख. किन नेपालले भारतलाई मात्र बिजुली बेच्नु पर्ने? भारत सङ्ग त संझौता भएको छैन। यो परियोजनाको तारमा जिडिएको बत्ती अरुलाई बेच्न त अमेरिकी कपिराट छ, त्यो पनि अब पृथ्वी रहे सम्म। संझौताको दफा ५.५. पढ्नु भएको छ। त्यांहा सभाइबल भनेर संझौताका अनेक दफा संधैका लागि रहने भनिएको छ।
ग. २०१९ को संझौता को दफा १.३. पढ्नु भएको छ? हामी त भरखरै देख्दै छौ। “यश परियोजनामा नियुक्ति गर्दा खुला तर “डिसरिगार्ड अफ नेसनालिटी एन्ड सिटिजनसिप” भनेको रहेछ। यस्को अर्थ जोसुकै नियुक्ति गर्ने सक्ने भनेको हो भनेर हामीले बुझ्यौं। हामीले बुझेको अंग्रेजी गलत हो भने सच्याइ दिनु होला।
घ. एम सि ए नेपाल भन्ने एउटा कार्यलय खुलेको रहेछ। दफा १.३. मा तेस्ले गरेका निर्णय गलत भए पनि सरकारले सोध्न नपाउने रहेछ, निर्णय बदल्न पनि नपाउने रहेछ, फेर्बदल गर्न पनि नपाउने रहेछ, परामर्श दिन पनि नपाउने रहेछ। यो कार्यलय स्वतन्त्र रहेछ, यस्ले सरकारलाई पनि बांध्न पाउने र सरकारका अनुचित प्रभाब पनि नलाग्ने रोक्ने रहेछ। सरकारलाई राज्यलाई दिएको सहयोग सरकारले हेर्न पनि नपाउने सर्त राखेर शहयोग किन लिनु पर्ने। बेहुलो ल्याउन चैं पाउने तर बेहुलो अरुकै अधिनमा रहनु पर्ने हो र जन्माएको बच्चामा अरुकै अधीन हुने भनेर गरेको बिबाह बेहुलिले किन मान्नु पर्ने?
ङ. हाम्रो पनि १३ करोड डलर परेको छ। पैसा एकै ठाउँमा छ। उताको पैसामा अमेरिकि कानुन र नीति लाग्ने। नेपालले त्यो मान्नु पर्ने। हाम्रो पनि पैसा परेकोले अमेरीकाले हाम्रो कानुन मान्नु पर्ने कि नपर्ने?
नपर्ने किन भने मोहि लाने गरिब पाएको मोहि ढिडो संङ्ग मात्र खानु पर्ने शर्त गरिबले त मान्नै पर्छ होइन। मित्रहरु गुलामी नगर्नु होस। देश ठूलो र सानो बलियो र कम्जोर हुन्छ। तर मानिस उत्रै हुन्छ। गुलामी गर्ने भए भए पनि उतिबेला भारतियहरुले सलौट गरे जस्तो सलौट सम्म गर्दा हुन्छ। पैताला पुस्नु पर्दैन। कम्तीमा पछि सन्तान सोद्धा कांडा निकाली दिएको भन्ने जवाफ दिने बाटो सम्म त राख्नु होस।
च. २९१७ को संझौता संसदबाट पारित नभै, किन २०१९ को संझौता गरेको। जब परियोजना लागू नै भैसक्यो तब संसदले पारित किन गर्नु पर्ने? किनकि तेसो गरे पछि, संझौतामा लेखिएको अमेरिकी बिदेश शहायता ऐन नेपाल कानुन भन्दा माथी हुन्छ, होइन? तेसो भए पछी त हामिले ताइवान र तिब्बत एबं कास्मिरी जेहादीलाई पनि स्वतन्त्रताकर्मी कै रुपमा मान्नु पर्ने हुन्छ नि होइन?
मित्रहरु तपाईहरु ले एउटा काम गरिदिनुहोस। नेपाललाई उचालेर अमेरिका छेउमा लान सक्ने केहि मेसिन छ भने पठाइदिनुहोस। नेपाललाई तेता लांदा तपाइँहरुलाई पनि नजिक हुने, हामिले पनि भारत र चिनको झन्जट बेहोर्नु नपर्ने।यदि उता कुनै ल्याटिन अमेरिकी देश सङ्ग साटन मिक्छ नेपाल भने तेसो गर्दिए पनि हुन्छ।
होइन भने नेपालप्रती अलिकता पनि प्रेम छ भने छिमेकी कि बक्रताको भुमरीमा हाल्न दबाब नदिनुहोस। हाम्रा छोराछोरीले माटो खनेर बांच्नु पर्छ। कित हामी सबैलाई उतै लगिदिनु होस। होइन भने आफनो गरेर खानु होस, कहिले कहिले आउनुहोस। तर त्यांहा बसेर नेपालको राजनीति नगर्नुहोस।